ရွှေ iPhone၊ ရွှေခေါင်းတလားအပါအဝင် ထူးဆန်းရူးနှမ်း ရွှေအသုံးအဆောင်များ - XYZ NEWS
ရွှေရောင်လွှမ်းတဲ့ တရုတ်ဘုရားကျောင်းတွေကနေ အီဂျစ် ဖာရိုဘုရင်တွေရဲ့ ရွှေကွပ်ထားတဲ့ ခေါင်းတလားတွေအထိ ရွှေကို အမြတ်တနိုး ထားရှိကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
ရွှေဟာ လူ ယဉ်ကျေးမှု ထွန်းကားလာတာနဲ့အတူ လူတန်းစားအလွှာကြား ချမ်းသာကြွယ်ဝမှုကိုလည်း ကိုယ်စားပြုနေပါတယ်။
ဒီလို တန်ဖိုးထားတဲ့ ရွှေကို တစ်ချို့က အလွန်အကျူး ဖော်ကျူးရာမှာ ထူးဆန်းရူးနှမ်းတယ်လို့ ဆိုရမှာပါပဲ။
၁. Gold Facial Mask (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀)
မျက်နှာအလှပြင်ဖို့ ရွှေသွင်းတယ်ဆိုရမလား နှစ်နာရီကြာ မျက်နှာကို ရွှေလွှာနဲ့ အုပ်ပေးတာအတွက် ကုန်ကျစရိတ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၀၀၀ ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာ လူချမ်းသာတွေအတွက်တော့ လက်လှမ်းမီတဲ့ အလှအပ ပြင်ဆင်မှုပါ။ ဒီလို မျက်နှာကို ရွှေလွှာအုပ်တာဟာ ကယ်လီယိုပက်ထရာ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့အတူ ရှေးခေတ်အီဂျစ်မှာ ခေတ်စားခဲ့တဲ့ မျက်နှာထိန်းသိမ်းနည်းပါပဲ။
ကယ်လီယိုပတ်ထရာဟာ ညတိုင်း မျက်နှာကို ရွှေအုပ်ပြီး အသားအရေ နုပျိုအောင်နဲ့ ကျန်းမာသန်စွမ်းအောင် လုပ်ခဲ့တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်က ကုမ္ပဏီတစ်ခုက ၂၀၀၆ ခုနှစ်မှာ ရွှေ ၂၄ ကာရတ်ရှိ gold mask တွေကို စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး အလွန်ကို နည်းပါးတဲ့ စတိုးဆိုင်တွေမှာပဲ ဒီ မျက်နှာရွှေလွှာကို ရနိုင်ပါတယ်။
၂. ရွှေချောကလက်သစ်ရွက် (အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၃၅၀၀၀)
အထူး စားမြိန်အဖြစ် ရွှေသစ်ရွက်လွှာလေးတွေပါတဲ့ ချောကလက်ဟာ ကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းလုံးက တကယ့် ဆိုင်ကြီးကနားကြီး အနည်းငယ်မှာပဲ တည်ခင်းနိုင်တဲ့ အချိုစားပွဲပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
၃. ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ခေါင်းတလား (ဒေါ်လာ ၅၀၀၀၀)
တရားဝင် သတ်မှတ်ခံထားရတဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ခေါင်းတလားကို Golden Casket Company က ထုတ်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။ လက်ဖြစ် ခေါင်းတလားဖြစ်ပြီး တန်ဖိုးကြီး ရွှေနဲ့ မြုပ်နှံသင်္ဂြိုဟ်ချင်သူအတွက် ရွှေကွပ်ထားတဲ့ ခေါင်းတလားပါပဲ။
၄. ရွှေရှပ်အင်္ကျီ (ဒေါ်လာ ၂၅၀၀၀၀)
ပန်းထိမ်သည် ၁၅ ဦးနဲ့ ၁၆ ရက်ကြာ မရပ်မနား ရက်လုပ်ခဲ့ရတဲ့ ရွှေရှပ်အင်္ကျီပါ။ ပိုင်ဆိုင်သူကတော့ ဒက်တာပန်ဂျီဆိုတဲ့ အိန္ဒိယသူဌေးတစ်ဦးပါပဲ။ ဒီ ရှပ်အင်္ကျီမှာ ၂၂ ကာရတ် ရွှေထည်စတွေ ၁၄၀၀၀ နဲ့ ရက်လုပ်ထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၅. ရွှေအိမ်သာ (ဒေါ်လာ ၂ ဒသမ ၅ သန်း)
ဘိုထိုင်အိမ်သာနဲ့ ကမုတ်ခုံတွေကို ၂၄ ကာရတ် ရွှေသားနဲ့ ပြုလုပ်ထားတာပါ။ တကယ့် အိမ်သာအစစ်အတိုင်း ဖြစ်အောင် စက္ကူဟာလည်း တန်ဖိုး ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၃ သန်း ရှိတဲ့ ရွှေစက္ကူလိပ်ဖြစ်ပြီး ပြုလုပ်တဲ့ ဩစတြေးလျကုမ္ပဏီကတော့ ဒီ ရွှေအိမ်သာကို ‘The toilet paper man’ လို့ နာမည်ပေးထားပါတယ်။
၆. ခရစ္စမတ်သစ်ပင် (ဒေါ်လာ ၁ ဒသမ ၁ သန်း)
ရွှေပင်ပေါက်တယ်လို့ ဆိုရမယ့် ရွှေတွေနဲ့ တန်ဆာဆင်ထားတဲ့ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ပါ။ ဒီ ရွှေခရစ္စမတ်သစ်ပ်ကို ၂၀၁၀ ခရစ္စမတ်က ဒူဘိုင်းက ကြယ်ခုနစ်ပွင့်ရှိဟိုတယ်တစ်ခုမှာ ခင်းကျင်းပြခဲ့တာပါ။ ကမ္ဘာ့ဈေးအကြီးဆုံး ခရစ္စမတ်သစ်ပင်အဖြစ် ဂင်းနစ်မှတ်တမ်း ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ခရစ္စမတ်သစ်ပင်မှာ တန်ဆာဆင်ထားသမျှဟာ ရွှေသားတွေပဲ ဖြစ်ပြီး လက်ဆောင်တွေကိုလည်း ရွှေလွှာတွေနဲ့ ထုတ်ပိုးထားတာ ဖြစ်ပါတယ်။
၇. ရွှေ iPhone (ဒေါ်လာ ၁၅ သန်း)
ဒါကို ကမ္ဘာမှာ ဈေးအကြီးဆုံး ဆဲလ်ဖုန်းလို့ ပြောရင် အံ့ဩတော့မှာ မဟုတ်ပါ။ ၂၂ ကာရတ် ရွှေကိုယ်ထည်မှာ စိန်စီထားတဲ့ iPhone ပါပဲ။ ရှားပါးလွန်းမှာဖြစ်တဲ့ ဒီ ရွှေ iPhone ကို ကျောက်မျက်လုပ်ငန်းရှင် Stuart Hughes က ပြုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
၈. ရွှေကွပ်တဲ့ လမ်ဘော်ဂီနီကား (ဒေါ်လာ ၆၂ သန်း)
ရွှေနဲ့ ပလက်တီနံ ကိုယ်ထည်မှာ ကွပ်ထားတဲ့ မယုံနိုင်စရာ မဟာကားတစ်စီးပါ။ ဒါတင်ပဲလားဆိုတော့ မဟုတ်သေးပါ။ စိန်ပါစီခြယ်ထားသေးပါတယ်။
ရွှေဟာ ဘယ်တော့မှ မှေးမှိန်သွားမှာ မဟုတ်ပါ။ တန်ဖိုးကြီးတဲ့ ရတနာစာရင်းဝင်မို့ပါ။ သမိုင်းတစ်လျှောက် ရွှေများစွာ တွေ့ရှိပေမယ့် ကမ္ဘာမှာ ရှိနေတဲ့ ရွှေသယံဇာတရဲ့ ၂၀ ရာခိုင်နှုန်းကိုပဲ တူးဖော်တွေ့ရှိသေးတာလို့ ယူဆထားကြတာလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
Rf; Crafty News Critter